तपाईंको फेसबुक अरुले चलाएको कसरी थाहा पाउने ? | Ratopati
तपाईंको फेसबुक अरुले चलाएको कसरी थाहा पाउने ?
त्यहाँबाट ‘Where you're logged in’ को अप्शन देखिन्छ । त्यहाँ तपाईंको फेसबुक लगइन भएको डिभाइसको पूरा जानकारी पाउन सकिन्छ ।
त्यहाँ ‘ Where you're logged in’ अप्शन देखिन्छ ।
त्यसमा ‘ See All' मा क्लिक गर्नुस् ।
त्यहाँबाट तपाईंको फेसबुक कुन कुन डिभाइसमा खोलिएको छ भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ । यदि त्यसमध्ये आफूले लगइन गरेभन्दा फरक डिभाइसमा फेसबुक खोलिएको पाइएमा 'log Out of All Sessions' गर्न सकिन्छ ।